C/rashiid Khaliif: Haddii ay sida NISA wax u sheegtay ay u jiraan midbaa la rabay – Hornafrik Media Network
Agaasimaha Machadka cilmi barista siyaasadda ee Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo la hadlay VOA ayaa sheegay inuu aad u saluugsanyahay qoraalkii maanta ka soo baxay hey’adda Nabad sugidda Qaranka ee NISA oo lagu sheegay in qaraxii 28-kii bishan Muqdisho ka dhacay ay ka danbeysay dowlad shisheeye.
Cabdirashiid ayaa sheegay in hadii wax ka jiraan qoraalka ka soo baxay NISA ay aheyd inay soo bandhigto macluumaad dhameystiran si cida lagu tuhmo ama ay ku cadaato loogu jaheeyo eedaha iyo tuhunka laga qabo Al-Shabaab oo xataa madaxda dowladdu ay ku eedeysay.
Sidoo kale qoraalka ayuu sheegay inuu ula muuqday mid uu gadaal ka riixaayey dal kale oo maagaya sida Turkiga oo dad uga dhintay qaraxaas, sidoo kalena uu khilaaf siyaasadeed kala dhexeeyo Imaaraadka.
Agaasimaha ayaa sheegay in ka hortaga qaraxaas ay mas’uuliyadda koowaad ka saarneyd dowladda, isla markaana ay aheyd in hadii fashil amni oo intaas la’eg uu dhacay dad shaqada looga ceyriyo ama iyagu is casilaan, balse taas bedelkeed dad aan khibrad u laheyn shaqooyinkii loo dhiibayo.
Guddoomiyaha Machadka Heritage Cabdirashiid Khaliif ayaa sheegay in hadii si ay NISA qoraalka u dhigtay ay wax jiraan ay ku habooneed in kulan degdega ay iskugu yimaadaan madaxda sare ee dowladda sida Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha, Gudoomiyaha Baaarlamaanka si warbixin iyo xog dhameystiran loola wadaago shacabka iyo caalmakaba.
Sidoo kale waxa uu sheegay in sababta ugu weyn ee Shabaab in ka badan 10 sano ay xasuuqa uga wadaan dalka ay tahay ganacsatada oo si xowli ah kharash badan ugu taageeraysa si walbaba ha uga qaadeene iyo kala daadsanaan weyn oo ka dhex jirta dowladda iyo shacabka.
Ugu danbeyntii Agaasimaha ayaa sheegay in warbixinta NISA ay tahay mid macquul noqon karta maadaama mudo dheer ay dalkaan faragalin ku haayeen dalal shisheeye sida uu hadalka u dhigay. In wax la qarxiyo ayuu sheegay in looga bartay Al-Shabaab, balse hadii ay soo kordhaan wax kale dowladda looga fadhiyo inay cadeyso.